Uthando kunye naMandla oPhiliso oThinta-iSiseko soMvuzo
Ikhaya Iibhulogi zeendaba Uthando kunye naMandla oPhilisayo oThinta
lawula888 19I ngoNovemba 2020 Iindaba zamva
Uthando kunye namandla okuphilisa okubamba ayimfuneko kwimpilo yethu kuba isenza sizive sikhuselekile, sikhathalelwe kwaye singaphantsi gxi niniswa. Ugqibele nini ukuchukunyiswa? Ukufumanisa ngakumbi, i-BBC yenza uphando olubizwa ngokuba Uvavanyo lweTouch Ngale ndlela iphantsi kophando. Olu phando luqale phakathi kukaJanuwari noMatshi walo nyaka. Phantse abantu abangama-44,000 bathathe inxaxheba kumazwe ali-112 ahlukeneyo. Kukho uthotho lweenkqubo kunye namanqaku malunga neziphumo zophando. Nazi izinto ezigqwesileyo kuthi kwizinto ezimbalwa ezipapashiweyo:
Amagama amathathu aqhelekileyo aqhele uku Chaza ukubamba zezi: "ukuthuthuzela", "ukufudumala" kunye "nothando". Kuyamangalisa ukuba "ukuthuthuzela" kunye "nokufudumala" ngamanye amagama amathathu aqhelekileyo asetyenziswa ngabantu kuyo yonke imimandla yehlabathi.
Ngaphezu kwesiqingatha sabantu bacinga ukuba abanako ubambe ngokwaneleyo ebomini babo. Kolu phando, iipesenti ezingama-54 zabantu bathe banomnxeba omncinci kakhulu ebomini babo kwaye yi-3% kuphela abathi banokuninzi kakhulu.
Abantu abathanda ukuthintana nabanye badla ngokuba nenqanaba eliphezulu lentlalontle kunye namanqanaba asezantsi okulilolo. Izifundo ezininzi zangaphambili zibonise kananjalo ukuba ukubamba into evumayo kulungile kuthi ngokwasemzimbeni nangokwengqondo.
Sisebenzisa iintlobo ezahlukeneyo ze imithambo-luvo ukufumanisa iintlobo ezahlukeneyo zokuchukumisa.
“Imicu yemithambo-luvo ekhawulezayo iyaphendula xa ulusu lwethu luhlikihliwe okanye lutsarhwa, luthumela imiyalezo kwindawo yobuchopho ebizwa ngokuba yi-somatosensory cortex. Kodwa kwiminyaka yakutshanje, uNjingalwazi we-neuroscientist uNjingalwazi uFrancis McGlone ebefunda olunye uhlobo lwe-fiber fiber (eyaziwa ngokuba yi-afferent C fibers) eqhuba ulwazi malunga neshumi elinesihlanu lesantya solunye uhlobo. Bahambisa ulwazi kwicandelo elahlukileyo lobuchopho elibizwa ngokuba yi-insular cortex-indawo ekwaqhuba ukungcamla kunye neemvakalelo. Ke kutheni le nkqubo icothayo ikhule ngokukhawuleza nje? UFrancis McGlone ukholelwa ukuba imicu ecothayo ikho ukuze ikhuthaze ulwalamano phakathi kwabantu ngokuphulula ulusu. ”
Amandla okuphilisa okuThantamisa
Kwilizwe elikhuthaza isini esikhawulezayo, esikhuthaza ukuba neentlobano zesini ezingamanyala, amaxesha amaninzi kunokuba imodeli enobundlobongela, isini esinyanzelekileyo, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba abantu bayaphumelela ngothando oluthambileyo njengoko lusenza sizive sikhuselekile kwaye sithandwa, kubalulekile kwimpilo yethu kwaye ukusinda.